Daw Suu visits Min Ko Naing's family
Interview with U Win Tin - Dictatorship at every level in Burma
အာဏာရှင်စိတ်ဓာတ်တွေ အလွှာတိုင်းက စွန့်လွှတ်ဖို့ လိုတယ်
မိုးမခ၊ စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက မြန်မာကြံ့ဖွံ့အစုိုးရက လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တရပ်ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအာမခံချက်တွေ ရှိကြောင်း ပြသနိုင်ဖို့၊ မြန်မာပြည်အထွေထွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ လက်ရှိအာဏာပိုင်တွေက အစီအစဉ်တွေ ဖော်ဆောင်လာနေတဲ့အပေါ်မှာ အတုိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဦးဝင်းတင်ရဲ့ သဘောထားကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Political Prisoners situation in Burma demonstrated in Buffalo, NY
ဘတ်ဖဲလိုးမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှု ကျင်းပ
မောင်မောင်ဝမ်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁
စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁ ညနေ ၄နာရီ အချိန်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ပြည်နယ် ဘတ်ဖဲလိုးမြို့မှာ..မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ ထောင်တွင်း ရပ်တည်နေထိုင်မှု့များကို သရုပ်ဖော်ပြသသည့် အခမ်းအနားတရပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် စိတ်ဝင်စားသူများ တက်ရောက်အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူများက သိလိုသည့်မေးခွန်းများကိုေ မးမြန်းရာတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်။
U Thumigala Dhamma Talk in Japan
ရွာဆော်ကြီးပြက္ခဒိန် - သာရေး
Tu Maung Nyo - U Thein Nyunt finding closure
ဦးသိန်းညွန့် နဲ့ သူ၏ မေးခွန်း
“ဦးသိန်းညွန့်” ကို အကဲဖြတ်မလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထူးခြားတယ်လို့ပြောရမှာလား။ ဆန်းကြယ်တယ်လို့ဆိုရမှာလား။ နှစ်ခု စလုံးပဲလား။ ရောထွေးနေပါတယ်။ ဒီတော့ စာဖတ်သူများကပဲ ဘယ်စကားလုံးနဲ့သင့်တော်မယ်ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ကြပါတော့။
ဦးသိန်းညွန့်ပတ်သက်ပြီး အပေါ်ယံ တွေ့ထားတာလေးတွေ ရေးပြပါရစေ။
Maung Yit - Hand Written Notes by the editor
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁
Interview with Gaw Phi Arr - why go home?
Burmese Samll Business Man - Phillip Maung at the US Congress
VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကောက်နုတ်ချက်၊ စက်တင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၁
Zaw Hmine (Oakland) - Burma is the side dish of China
ကာတွန်းဇော်မှိုင်း (ဥက္ကလံ) - တရုတ်၏လိုက်ပွဲတပွဲ = မြန်မာပြည်
Kan Tun Thit - Short stories
ကိုယ့်အစ်မတစ်ယောက်ပို့လိုက်သည့် ပါဆယ်လေးကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ မဂ္ဂဇင်းလေးတစ်အုပ်၊ ဆည်းဆာ ရောင်စုံဟပ်နေသည့် မြစ်တစ်စင်းပုံနှင့်မျက်နှာ ဖုံးလေး၊ နောက်ကျော ဖုံးမှာ တော့“ထလော့မြစ်မင်း ဧရာ”တဲ့။ ဆရာဒဂုန်တာယာ၏ကဗျာလေးက နေရာယူလျှက်၊ ကဗျာကိုတိုးတိုးညည်းမိရာအဆုံးမှာတော့ ….
မြစ်မင်းဧရာဝတီ ထလော့ လှလော့ ကလော့ ကလော့ဧရာဝ တီ ရေတွေစီးလော့။
ကိုယ့်ညာဘက်ရင်အုံသည် ဒိတ်ဒိတ်နှင့်တိုးလာတော့သည်၊ လှိုင်းကြက်ခွပ်လေးများနှင့် တငြိမ့်ငြိမ့်စီး နေသောဧရာဝတီသည် ကိုယ့်ရှေ့ သို့ရောက်လာတော့သည်။
ရွာ့ခေါင်းရင်းမလှမ်းမကမ်းမှ ကွေ့၍စီးဆင်းသွားသော မြစ်မင်းဧရာဝတီ၊ ဥတုသုံးပါးလုံး အလှမဆိတ်သည့်မြစ်။ ဆောင်းရာသီနှင်းမှုံကြား တွင်ဖြစ်စေ၊ မုသ်သုံဦးလှိုင်းမြူးချိန်မှာဖြစ်စေ၊ လှေမဆိတ် လူမတိတ်နှင့် လှမြဲလှ လျှက်သာ။
Thurain Htet - Article
စာပဒေသာ - အက်ဆေး
Interview With Thee Lay Thee, Pann Thee & Kye Thee - ready to go home?
journal pieces on Sep 9
သောင်းပြောင်းထွေလာ - မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ် အညွှန်း
ပြည်တော်ပြန်မယ့် ဂေါ်ဇီလာ ပြီးတော့ ဂျွန်အိုကဲ နဲ့ ထူးခြားတဲ့ ပူဇော်ကန်တော့ပွဲ
Cartoon Win Pe : Shadow
ကာတွန်း ၀င်းဖေ - အရိပ်
မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင် အသီးသီးရှိ ရုပ်သံသတင်းသမား ၁၇ ဦး နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒပြပွဲကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ယနေ့ ပြုလုပ်နေပုံများ ဖြစ်သည်။
DVB သတင်းဌာန ရုပ်သံသတင်းသမား မလှလှဝင်းပုံပါသော မျက်နှာဖုံးများတပ်ပြီး ဆန္ဒပြခြင်း ဖြစ်သည်။ (ဓာတ်ပုံများ - free burma vj)
U Kyaw Hsan loves storytelling in parliament
လွှတ်တော်တွင် ဦးကျော်ဆန်း ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းဇာတ်ခင်း
Results 145 - 162 of 7952